Kuxwayiswe abahloli bezikole zaseKZN | IOL Isolezwe
Kuxwayiswe abahloli bezikole zaseKZN
Isolezwe / 6 July 2012, 10:20am / MHLENGI SHANGASE
IZINHLOKO ezimele izikole ezindaweni ezizakhele esifundazweni zihlanganele eThekwini College ISITHOMBE BONGANI MBATHA
UDR Nkosinathi Sishi ongumqondisi emnyangweni wezemfundo KwaZulu Natal kwesokunxele noNKK Judy Sishi ISITHOMBE BONGANI MBATHA
ABAHLOLI ezikoleni zaKwaZulu-Natal sebeyalelwe ukuthi yize bengamalungu ezinyunyana noma besemaqenjini ahlukene ezepolitiki kodwa konke lokhu abakushiye ngaphandle komsebenzi bagxile ekwesekeni othishanhloko nezikole.
Lesi sexwayiso sikhishwe yinhloko yoMnyango wezeMfundo esifundazweni, uDkt Nkosinathi Sishi ekhuluma nabahloli nabaqondisi bezifunda eThekwini izolo.
USishi uthe umsebenzi oseqhulwini ngukuthi beseke izikole nothishanhloko baqinisekise ukuthi uhlelo lwezemfundo luyalandelwa.
“Noma kungathiwa ukuyiphi inyunyana noma ukuliphi iqembu lezepolitiki, uma ungumhloli noma unguthishanhloko usuke usumele umqashi ongumnyango. Animele izinyunyana noma amaqembu ezepolitiki. Kushiyeni ngaphandle konke lokho nenze umsebenzi eniqashelwe wona njengezimenenja,” kusho uSishi.
Uthe okwenzeka ekilasini yiyona into ebaluleke kakhulu kubona wathi kumele isikhathi sabo esiningi basichithe ezikoleni kunasemahhovisi.
“Isikhathi esiningi senu kumele nisichithe nixazulule izinkinga ezikoleni, hhayi kwenye indawo. Kubalulekile ukuthi uma nisebenza ningaqumbi ngoba anibakhulu ukudlula abanye abasebenzi, kungathi uma kufike nina bahloli bese kuthiwa kuma yonke into, sebenzani ngamaqoqo,” kuqhuba uSishi.
Uthe izingane eziningi ezifeyilayo yilezo zabangaphili kangcono wathi lezo eziphila ntofontofo zenza kahle kakhulu.
Ukhale nangokuthi akubona abafundi abafeyilayo kodwa kusuke kufeyile wonke umnyango kusuka kuyena njengenhloko kuye kubahloli ngaphambi kokuba kufike ezikoleni.
“Akubona abafundi abafeyilayo kodwa wuhlelo lwezemfundo olusuke lufeyilile bese kuba sengathi yibona. Kwamanye amazwe akugxiliwe kakhulu ezingeni lokuphasa kwaMatric ngoba bonke abafundi bakhona basuke bezithemba bazi ukuthi bazophasa,” usho kanje.
Njengoba kuqhubeka izingxoxo zamaholo phakathi kukahulumeni nezinyunyana, uSishi uthe kumele kuphele inyanga ezayo ibe isiphothuliwe isilabhasi.
“Insimbi iyashisa sifuna ukuthi kuphela inyanga ezayo ibe isiphelile isilabhasi ukuze kuthi noma kwenzeka noma yini sazi ukuthi siqedile. Kusengenzeka noma yini izinyunyana zithi azisamukeli isiphakamiso samaholo, zithi ziya emgwaqweni ngakho kumele sibe sesiqede yonke into,” usho kanje.
Yize engafunanga ukunaba kabanzi kodwa uthe uma kusuke kuthiwa kuphaswe ngo-70% kuleli kusuke kungakhulunywa iqiniso.
UNksz Judy Dlamini, oyisikhulu sophiko i-Institutional Development and Support, ugcizelele kwelokuthi abahloli abangathi xhinti ezikoleni kodwa abazinze usuku lonke ukuze baxazulule izinkinga ezikhona.
Uthe kumele bazi ukuthi isikhathi esiningi bayosichitha bexazulula izinkinga ezikhona.